Adobe Spark dia nanambara tolotra maimaimpoana 60 andro ho an'ny fanariam-pako | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | Famolavolana tranonkala, Tambajotra sosialy, maro
Nandritra ireo andro nigadrana Adobe Spark dia nanambara fa manomboka anio hatramin'ny 15 Jona Amin'ity taona ity, ny mpanjifa rehetra maniry dia afaka mahazo azy io maimaim-poana amin'ny fandoavam-bolan'ny Spark. Vaovao tsara amin'ny famoronana atiny avo lenta amin'ny endrika sary ho an'ny tambajotra sosialy, tranokala ary horonan-tsary fohy.
Izany fanentanana izany tsy manankery ho an'ny mpampiasa vaovao ihany, fa ho an'ireo manana fisoratana anarana mavitrika amin'ny serivisy aorian'ny fanampiany ireo 60 andro ireo ary nahazo faktiora fanemorana ho an'io isa andro io.
Ny tiako holazaina dia inona avy amin'ity rohy ity, ho afaka ianao hisoratra anarana mandritra ny roa volana amin'ny Adobe Spark, fitaovana iray tena manokana hamoronana ireo sary ireo ka ilaina ankehitriny ho an'ireo tambajotra sosialy na pejin-tranonkala. Noho ny fandrosoana manokana ataon'ireto tambajotra sosialy ireto, toy ny Instagram sy ny Tantara, sary ho an'ny fandaharam-potoana na horonan-tsary, fitaovana iray toy ny Spark no ahafahanao mamorona atiny tadiavina.
Miaraka amin'ny Spark Individual ananantsika fidirana amin'ny maodelim-panoratana marika premium sy mahazatra, ny trano famakiam-bokatra Adobe feno, fitaovam-piaraha-miasa, fanohanana marobe, ary maro hafa. Mazava be fa ity fampiroboroboana ity dia mifamatotra akaiky amin'ny fotoana fitanana fa miaina eran'izao tontolo izao isika ary ahafahan'ny maro amin'ny tranony miditra amin'izao fotoana izao fitaovana tonga lafatra hamoronana sary tsara indrindra.
Raha ny tena izy, Adobe dia tena ara-potoana miaraka amin'ireo boky fandokoana sa izay fonosana omaly miaraka amin'ny Adobe Photoshop ho an'ny iPad ary Adobe Fresco. Raha ny marina dia nizara an'ity ny Adobe for Spark apetraho amin'ny toro-hevitra sy modely noho izany manampy ny famoronana kely orinasa izay no tena mijaly indrindra amin'izao andro izao amin'ny coronavirus.
Fotoana tsara ho an'ny andramo maimaimpoana mandritra ny 2 volana ny Adobe Spark ary arak'izany ny traikefa amin'ny situ.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Maimaimpoana ny Adobe Spark mandritra ny 60 andro hatramin'ny 15 Jona
Salama! Fantatrao fa nisoratra anarana tamin'ity "promo" ity aho fa vao hitako fa nampandoaviny vola isam-bolana aho ... Famitaka ve izany? Mila fampahalalana aho (ary mahay manao fangatahana), raha azonao omena ahy io dia tiako io
Ampidiro ny kaontinao ary mandefasa mailaka hijerena ny zava-nitranga. Amin'ny sehatra hafa rehefa voasazy ianao dia azonao atao ny milaza fa efa nandalo anao izy io.